प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता १३ औँ महाधिवेशनको धपेडीमा छन्। महाधिवेशनपछि कांग्रेस कसरी अघि बढ्ला? यसले कस्तो नीति लेला? संगठन कसरी अघि बढाउला? कांग्रेसका शुभेच्छुक तथा राजनीतिमा चासो दिनेहरूको मनमा स्वाभाविक रूपमा यी प्रश्न उब्जिएका छन्।
१३ औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कार्यकर्ता र सर्वसाधारणमा कांग्रेसप्रति अनेकौँ जिज्ञासा छन्। कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको मनमा उठेका जिज्ञासाको एकमुष्ट जवाफ खोज्ने थलो भनेको महाधिवेशन हो। महाधिवेशनमा हुने छलफल र पार्टीले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नै कांग्रेस कस्तो हुँदै छ? देशका जल्दाबल्दा 'इस्युमा' कांग्रेसको 'पोजिसन' के हो? भन्ने प्रस्ट हुन्छ। कुनै पनि दलको महाधिवेशन भनेको नेतृत्वको निर्वाचनमात्र होइन भन्ने तथ्य बुझ्न जरुरी छ। तर, कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरू भने पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई भन्दा आफू कसरी नेतृत्व पुग्न सकिन्छ भन्ने जोडघटाऊमै व्यस्त देखिन्छन्। महाधिवेशनपछिको नेतृत्वमा को आउला भन्ने बहस जोडतोडले भए पनि पार्टीले लिने नीति तथा कार्यक्रमप्रति कसैको पनि रुचि देखिन्न। पार्टी जीवन्त हुनका लागि त्यसले अघि सार्ने नीति तथा कार्यक्रम समयसापेक्ष हुन जरुरी छ। निश्चित दर्शन, आर्दश र विचारबाट 'गाइडेड' हुने राजनीतिक दलले आफूलाई समयसँगै परिष्कार र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नसकेन भने उसको इतिहास जतिसुकै सुन्दर भए पनि ऊ जनतामाझ टिकिरहन सक्दैन। कांग्रेससँग पनि सुनौलो इतिहासको ठूलै चाङ छ। हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको यो दलले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति बनाउन गर्नुपर्ने त्याग र निष्ठाको राजनीतिमा भने अहिलेसम्म आफूलाई खरो रूपमा उतार्न सकेको छैन। पार्टीको सांगठनिक संरचना र नेतृत्वमा पुग्नका लागि 'वंश लिगेसी' लाई प्रधान मान्ने यो दलभित्र थुप्रै अलोकतान्त्रिक बिसौनीहरू विद्यमान छन्।
पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममा रुचि र चासो दिनुपर्ने सभापति सुशील कोइरालाको चिन्तन कांग्रेसलाई कसरी कोइराला थरभित्रै खुम्चाइराख्ने भन्नेमा देखिन्छ। पार्टी सभापतिमा कोइराला थर बाहेकका कोही निर्वाचित भयो भने पार्टी भष्मखरानी हुन्छ भन्दै सुस्केरा हालिरहेका सभापति कोइरालासँग कांग्रेसलाई अघि बढाउने कुनै नीति र कार्यक्रम छैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। उनको पाँचवर्षे सभापति कार्यकालमा कांग्रेसभित्र गुटगत राजनीति अझै मौलाएको छ। कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको खेमामा विभाजित कांग्रेसलाई उनले एकढिक्का बनाउनेतर्फ कुनै पहल नै गरेनन्। १२ औँ महाधिवेशनमा सभापति कोइरालाले झिनो मतअन्तरले मात्र वरिष्ठ नेता देउवालाई पराजित गरेका थिए। पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाबाट चलाउने प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गर्ने गरेका सभापति कोइरालाले त्यही काम गर्न नसक्दा कांग्रेसमा अहिले पनि टाढैबाट देखिने चिरा परेको छ। सभापति कोइराला यसपटक पनि आफू सभापति नहुने हो भने कांग्रेस ध्वस्त हुने बताइरहेका छन्। कांग्रेसलाई कोइराला परिवारकै विरासतका रूपमा संरक्षित गर्नुपर्ने उनको तर्कले कांग्रेस कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छ भन्ने प्रस्ट भएको छ। पार्टी नेतृत्वका लागि कांग्रेसभित्र एकसे एक नेता छन्। तर, सबैको थर कोइराला हुन सम्भव हुँदैन। थर कोइराला नहुनेबित्तिकै उसले पार्टीलाई तहसनहस बनाउँछ भन्दै रोइकराई गरिरहने सभापति कोइराला र उनका पारिवारिक सदस्यहरूले छिमेकी देश भारतको कांग्रेस आईको वर्तमान अवस्थालाई हेरे पुग्छ। कांग्रेस आईको नेतृत्वमा अहिले पनि गान्धी परिवारकै छन्। तर, त्यो पार्टी राष्ट्रिय दलको हैसियतमा पनि पुग्न नसक्ने गरी निर्वाचनमा पराजित भयो। पार्टीलाई पारिवारिक विरासतका रूपमा मात्र कब्जा गर्न खोज्दा नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि भारतको कांग्रेस आईकै जस्तो नहोला भन्न सकिन्न।
पार्टी सभापतिको दर्बिलो दाबेदारका रूपमा रहेका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पनि 'अब मेरो पालो' शैलीमा मात्र सभापति पदको दाबी गरिरहेका छन्। उनले आफूलाई पार्टीभित्र साझा नेताका रूपमा विकास गर्न सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिमका देउवा सामान्य परिवारिक पृष्ठभूमिबाट केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भएका नेता हुन्। उनी थर वा वंश परम्पराबाट राजनीतिमा स्थापित पात्र होइनन्। त्यसैले उनीसँग वंश र थरको परम्परा धानिरहनुपर्ने तनाव छैन। उनी ठूलो छाती लिएर राजनीति गर्न सक्छन्। तर, त्यसका लागि उनलाई पनि चाहिने भनेको पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम नै हो। पार्टीको विधि र प्रक्रियालाई मानेर अघि बढ्ने साहस हो। उनले सभापति भएपछि कांग्रेसलाई कसरी अघि बढाउनेछन् भन्ने विषयमा अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन्। देउवाले पार्टी नेतृत्वले गरेको कमजोरी र उनले आगामी दिनमा गर्न चाहेको कामका बारेमा आफ्ना मतदातालाई छिटोभन्दा छिटो बुझाउन आवश्यक छ। 'म बूढो भएँ, यति वर्षदेखि यही पार्टीमा छु, यति वर्ष जेल बसेको छु' भनेर दाबी गरेकै भरमा नेतृत्वमा जाने हो भने कांग्रेस 'बाह्र वर्ष केको पुच्छर ढुंग्रोमा राखे पनि बांगाको बांगै' भन्ने उखानजस्तै रहिरहनेछ।